China Abenzi beGreyiti yeMagnetic kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Isikwere seMagnetic Square sinemivalo yemagnethi yeNdfeb, kunye nesakhelo segridi yamagnetic eyenziwe yintsimbi engenasici. Le ndlela yemagnethi yemagneti inokulungiswa ngokweemfuno zabathengi kunye nemeko yendawo yokuvelisa, iityhubhu zemagnethi eziqhelekileyo ubukhulu be-D20, D22, D25, D30, D32 kunye ne-ect.
Isikwere Iibalo zeMagnetic zenzelwe ukwahlula ukungcola kwizinto ezihamba simahla ezifana nekhabhoni emnyama, iziyobisi, iikhemikhali, izithambiso, iiplastiki, amashishini okutya njalo njalo. Ezi yunithi zifakwe ngokulula nakweyiphi na i-hopper okanye ukuvulwa komgangatho, i-chute okanye i-duct. Yenza imveliso ibe ngumsinga simahla kwiimveliso zokuhamba eziza kunxibelelana ngqo neemagnethi zerhasi.
1. Ukugqiba: Ukupolisha kakuhle kunye nokudibanisa ukuhlangabezana nenqanaba lokutya.
2.Impahla yegobolondo: i-SS304, i-SS316 kunye ne-SS316L ityhubhu yentsimbi engenamthungo
Ubushushu bokuSebenza: Ubushushu obusebenzayo bokusebenza kweemagnethi ezingama-≦ ngama-80 ℃, kodwa ukuba kufuneka ubushushu obuphezulu, sinokubonelela ukuya kuma-350 ℃ ukuhlangabezana nezicelo zakho ezizodwa
4. Uyilo olwahlukeneyo luyafumaneka. Uhlobo oluqhelekileyo, uhlobo olucocekileyo ngokulula, umaleko omnye, imultilayer
5. Kwakhona ithatha abathengi 'yoyilo lweemagnethi zemagnethi.
6. Uyilo loMthengi, iinkcukacha zinokuzaliseka.
Iimveliso zingumgubo owomileyo kunye nembumbulu, ngelixa izinto ezingcolisayo zincinci kwaye zilungile.
Egqithileyo Iimagnethi zomGibe woTywala kunye nohlobo loQhagamshelo lweFlangle
Okulandelayo: Isahluli seMagnetic Magnetic esinee-Multi-Rods
Thenga iigridi ezahlula isikwere
Iimagnethi zoMthengi zoMthengi
Igridi yesiQhekeza esaMagama esiQhelekileyo
Uxande Magnetic umahluli isahluli
Uxande Iigridi Magnetic
Okoxande Grid oomazibuthe
Ukucoca iGridi yeMagnetic ngokuLula
Isikwere sothango Magnet
Umazibuthe weSikwere seGridi
Isikwere seGridi yokwahlula-hlula kwesikwere